अब संसारका कुनै अस्पतालमा लगेपनि कहिल्यै निको नहुने , वर्षमानलाई लागेको दुर्लभ रोग के हो ? – Cn Chautari
पुष २३, २०७८ शुक्रबार 510
उपचारका लागि उनी गत असोज १३ मा थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका थिए। लगत्तै त्यहाँबाट उनी चीन पुगेका थिए। चिकित्सकका अनुसार उनी ‘क्रिग्लर-नजर-टाइप टु सिन्ड्रोम’ नामक दुर्लभ समस्याबाट पीडित छन्।यो वंशाणुगत रोग भएको बताइएको छ।
पुनको शरीरमा देखिएको जण्डिसको मात्रा अस्वभाविकरूपमा बढेको चिकित्सकहरूले बताएका थिए। यसै सन्दर्भमा पुनमा देखिएको ‘क्रिग्लर-नजर-टाइप टु सिन्ड्रोम’ के हो भनेर जनरल फिजिसियन डा. अमित गौलीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।क्रिग्लर नजर सिम्टम’ भनेको ।
सानो उमेरदेखि वा जन्मजात नै हुने जण्डिस टाइपको एक प्रकारको रोग हो। जण्डिस भएपछि मानिसमा पहेँलोपना आउने कारकलाई ‘बीलीरुबीन’ भन्छौं।शरीरमा भएको ‘बीलीरुबीन’को लेभल बढ्छ। क्रिग्लर नजरमा कन्जुगेटेड र अनकन्जुगेटेड ‘बीलीरुबीन’ भन्ने हुन्छ। ‘बीलीरुबीन’को लेभल बढ्ने तर, कलेजोका अरु प्यारामिटर र जाँचहरु नर्मल हुन्छ।
Prevचर्चित सामाजिक अभियन्ता गिभिना मगरको बुवा आइसीयुमा भर्ना ! GET WELL SOON लेख्नु होला
Nextनेतालाई ‘धम्क्याउने’ एसपी पाण्डे निलम्बित !